Usefana nesigwaca ngenxa yokulwa nomkhonyovu – Ubukhosi
Home/ Umkhandlu/Usefana nesigwaca ngenxa yokulwa nomkhonyovu
Usefana nesigwaca ngenxa yokulwa nomkhonyovu
Ubukhosi News February 23, 2018
IMeya uMakhosini Nkosi
ISIHAMBA ijeqeza iMeya kaMasipala waseNewcastle ngenxa yesinqumo sayo sokumisa ezinye izinkampani ezisolwa ngokuthola imisebenzi ngenkohlakalo. Okunye okufakela iMeya ingcindezi ukuqala kwayo uphenyo emakhanseleni nakubasebenzi abanukwa ngokugwazisela amathenda.
U-Advocate uMakhosini Nkosi ungene kulesi sikhundla ngemuva kokunqoba kwe-ANC ukhetho loHulumeni baseKhaya, ngowezi-2016.
Ngemuva kokujutshwa kwakhe esuswa eSishayamthetho eMgungundlovu, uNkosi ufike waphendula amatafula eNewcastle wavumbulula amanyundululu enkohlakalo abephazamisa ukuhanjiswa kwezidingo emphakathini.
Ezinye zezinsolo eziphenywa uMkhandlu waseNewcastle ziqale ukubikwa ngaphambi kokhetho loHulumeni Basekhaya, lwangowezi-2011, nalapho owayeyikhansela likaKhongolose, uMnu uBlessing Mwali agcina esebhalela uMvikeli Womphakathi ebalisa ngenkohlakalo.
UMwali wagcina eshiya ku-ANC ngowezi-2016, wangenela ukhetho ngokuzimela.
Kumanje uNkosi uluqalile uphenyo kodwa lokhu sekumbeke engozini njengoba iBAYEDE, ihabule ukuthi ezokuphepha seziqinisiwe ngamandla.
“Uma uNkosi ezoya emhlanganweni oseThekwini noma oseMgungundlovu kwenziwa isiqiniseko sokuthi ufika khona eseshintshelwe ezimotweni ezimbili noma ezintathu. Uyabona nje uma esuka eNewcastle uhamba ngenye, afike ayishintshe eMnambithi efakwe kwenye. Nayo leyo moto akabe esabuya ngayo kodwa ubuyiswa ngenye. Lokhu kwenza noma ngabe kukhona abamlalele unyendle endleleni bangaqondi ukuthi uhamba ngayiphi imoto.
Phela lapha eNewcastle akudlalwa, ikhanda le ndoda liyashaywa ngakho naye usuke wathinta isidleke okudla kuso izinsizwa. Lo Masipala yiwo onemali ukudlula owesiFunda Amajuba. Ngikhuluma nje ubuye waphazamisa nokulungiswa komgwaqo osedolobheni okungu-Allan Street obekudliwa ngawo ngoba ubuhlale umbiwa kukhishwe ithenda yokuwulungisa. Lokhu kugcina sekwenza abanye abantu bakhononda bekhala ngokuthi njalo uma abanye abaholi bengasenamali bacabanga ukuthi akukhishwe ithenda kumbiwe lo mgwaqo. Omunye owayekhala kakhulu ngalokhu kwaba ikhansela eselahamba kithi ubaba uBlessing Mwali.
Inkinga ngoNkosi ukuthi uza ngomqondo wokuba ngummeli nokuyinto esimfake engozini ngoba ulambisa abantu ngokuvala amathenda athile,” kusho omunye wabaholi be-ANC esiFundeni iMalahleni.
Uthe umnotho waseNewcastle uyabangwa kangangokuthi baningi abantu asebedutshuliwe ngenxa yamathenda akhona.
Kumanje lo Masipala ubhekene nesikweletu semali eyizigidi ezingama-R500 kanti ngenyanga kumele ukhokhe izigidi ezingama-R47 kuze kuphele iminyaka eyisi-9.
Ngendlela okuthiwa inkohlakalo ibidla lubi ngayo eNewcastle, kuthiwa bekuganga ngisho abasebenzi abaqashelwe ukushayela imigwaqo, bedayisa imisebenzi kubantu bebathembisa ukuthi bazobakhulumela baqashwe.
Ethintwa uNkosi ukuze aphawule uvumile ukuthi ziningi izinguquko asefike wazenza selokhu ethathe izintambo kusuka ngowezi-2016.
Nokho ukugcizelele ukuthi ezinye izinqumo asezithathile ekulweni nenkohlakalo akakwazi ukukhuluma ngazo ephephandabeni ngoba lokho kungaphazamisa uphenyo oluqhubekayo kumanje.
“Sifike lo Mkhandlu ungenayo imali ngendlela yokuthi kuye kwaphoqeleka ukuba sithathe isinqumo sokuba kubuyekezwe amanye amathenda ebesinawo. Sikwenze lokhu ngenhloso yokuba sikwazi ukubona izinkontileka esisazidinga noma ezisawusizo kuMasipala ukuze sikhiphe lezo esingasekho isidingo sazo.
Enye inkinga esiyitholile ukuthi kukhona abasebenzi namakhansela abebegwazisa izinkampani ezisuke zigaqele amathenda. Lokhu kuholele ekutheni kugcine sekunikezwa izinkampani zabantu abangawazi umsebenzi. Ngiyazi ukuthi lokhu engikwenzayo akukuhle ngoba kuthinta izinkampani zabantu abebehlomula ngaphakathi. Okuhle nokwenza ngingasabi ukuthi unembeza wami umsulwa kulokhu engikwenzayo.
Angikwenzi ngoba ngifuna ukuba kuhlomule mina kodwa yingoba ngifuna sikwazi ukuhambisa izidingo kubantu ngendlela engenakho ukuphazamiseka. Inkinga uma ulwa nenkohlakalo eyokuthi kuba kubi, kube sengathi ulwa izimpi zakho noma ukwenza lokho ngoba nakhu ungahlomuli. Mina ngilwa nenkohlakalo ngoba ngisebenzela abantu futhi angizile emkhandlwini ukuzokweba kodwa ngizobuyisa ithemba. Ngingumuntu owaziwa umthetho njengommeli ozihloniphayo lapha eNewcastle. Ngakho namanje kumele ngiqhubeke nokuba yilokhu umphakathi ongazi ngakho ukumela iqiniso,” kusho uNkosi.
Uthe okubanika ithemba ukuthi abanye abasebenzi bazimisele ukubambisana nophenyo ngoba sebeqalile baletha ulwazi ngokwenzeka.
Ngaphandle kwalokho uNkosi uthe okuseqhulwini ukuba uma kuphuma amathenda kube nezikhangiso ezizobonwa umphakathi futhi nenkampani enikezwa umsebenzi kube yinto esobala ezokwaziwa ukuze kungabibikho inkohlakalo. Okunye ukuba kwenziwe isiqiniseko sokuba kuleyo thenda kuba namaphesenti angama-40 azohlomulisa umphakathi waseNewcastle ngqo.
Uthe lokhu kugwema nokuthi kube nokulwa okungenasidingo ngenxa yokuthi abantu basuke bebonile ukuthi ithenda ayinikezwa abantu ababodwa.
UNkosi akathandanga ukuchaza ngesimo sokuphepha kwakhe njengoba ethe lokhu kungasuke kubeke izinto eziningi engcupheni.
Lo mholi uyingxenye yeziMeya ezethulwe uKhongolose ngowezi-2016 ezazijutshwa koMasipala i-ANC eyayibabheke ngabomvu KwaZulu-Natal.
Ungene isimo simazonzo eNewcastle njengoba nokufungiswa kwakhe kuthathe isikhathi ngenxa yokulwa kwangaphakathi ku-ANC esiFundeni iMalahleni.
Lesi simo sagcina siphoqa ubuholi be-ANC KwaZulu-Natal ukuba buhlakaze isigungu sesiFunda iMalahleni.
Imizamo yoMkhandlu iZululand yokutakula intsha engasebenzi
ITheku liyaziqhelelanisa namakomidi ‘mbumbulu’ abahwebi